आयो दशैं ढोल बजाई ... ... !
गाेपाल ठाकुर कार्तिक १ ।
नेपालको पहाड़ी समुदायमा एउटा उखान अति प्रचलित छः—
आयो दशैं ढोल बजाई ।
गयो दशैं ऋण बोकाई ।।
यस पाली पनि दशैंको मुख्य आकर्षण नवरात्रि सकिएको छ । विजया दशमी पनि सकिने क्रममा छ र कोजाग्रत पूर्णिमासँगै बाँकी तडकभडक पनि शान्त हुने निश्चित नै छ । यस पछि नयाँ अन्न र पुरानो लुगामा गुजारा गर्नेहरूले खास गरी पहाड़तिर खर्चबर्चको हरहिसाब सुरू गर्लान् । कसले कोसँग कति ऋण लिए र कसरी चुक्ता गर्ने छन् ?
पुस्तौंपुस्तादेखि यो उखान जनजिब्रोमा झुण्डिएकै छ, दशैं ढोल बजाउँदै आउँदै रहने छ र ऋण बोकाउँदै जाँदै पनि गर्नेछ । आखिर किन ? मधेशको कुरो गर्ने हो भने नागपञ्चमी पछि फागुसम्म कुनै न कुनै चाडपर्व आएकै हुन्छ । लेखाजोखा गरियो भने अर्बौं रूपैयाँको खर्चसँगसँगै यी सबै चाडपर्वको माध्यमले रोगब्याधि पनि अर्जिन्छ नै । आखिर किन ?
हरेक चाडपर्वमा कुनै न कुनै ईष्ट देव-देवीको विशेष आराधना हुन्छ र सुख-समृद्धिको कामनाका साथ हुन्छ । त सहस्राब्दियौंदेखि जब यस्तो भई नै रहेको छ भने पुरानो अन्न खाने र नयाँ वस्त्र लाउने मुट्ठीभर ठालुहरू बाहेक आम जनता कङ्गालै किन रहेका छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर कसले खोज्ने ? धामी-झाँक्री, पण्डित-पुरोहित, साधु-ब्राह्मण, व्यास-वाचकहरू कि आम जनमानसको बीचबाट सामान्य मनुवाहरूले ?
हो, ज्ञान र अनुभवको हिसाबले त पहिलो समूहकै महानुभावहरूको यो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसो भए अहिलेसम्म उनीहरूले किन खोजेनन् त ? यो धेरै कठिन र मार्मिक प्रश्न छ । किनकि उनीहरूसँग सोध्दा आफ्ना यजमानहरूको समृद्धिका लागै नै उनीहरूले आफूलाई समर्पित बताउँछन् । अनि सहस्राब्दियौंको उनीहरूको यस्तो समर्पणको बावजूद आम जनमानसमा समृद्धि किन आएन त ? यसको कारण के छ भने उनीहरू यस लोकमा जे-जस्तै किन नहोस्, परलोकमा समृद्धिको कुरा गर्छन् । हो, यजमानको परलोक सुधार्ने कुरो त हुन्छ तर दान-दक्षिणा कम भयो भने त फेरि ती अगुवाहरूलाई परलोकभन्दा इहलोकमैं चिन्ताले पिरोल्न थाल्छ । हजुर, त यो कुरोलाई हामी जबसम्म बुझ्दैनौं, तबसम्म हाम्रो दुर्दशा कम हुनेवाला छैन ।
सनातनीहरूको बीचमा जति महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू छन् ती साउनदेखि फाल्गुणको बीचमा पर्नु, सबैमा महिलाले नै उपवास बस्ने पालो पहिले हुनु, मनवाञ्छित पति र सन्तानको चिन्ताले महिलाकै मनमा ब्रत-उपवासको पहिलो सरोकार देखिनु जस्ता विषयमाथि केही त सोच्नु जरूरी छ कि ? यसको साथै के पनि सोच्नु पर्छ भने देवी-देउता वा भगवानहरूको गुनगान ठूल्ठूला राक्षसहरूलाई मारेकै कारण किन हुन्छ । राक्षसलाई मार्ने त्यस्ता देवी-देउता र भगवानहरू आफ्ना भक्त वा आफ्नो मातृभूमिको लागि के गरे, यसको व्याख्या कुनै शास्त्रमा पाइँदैन किन ? फेरि दैँत्य वा राक्षसहरूको लडाइँ यी शक्तिशाली देवी-देउताहरूसँगै किन पर्‍यो ? किनभने आम जनमानसलाई उनीहरूले खासै बिगारेको उल्लेख कुनै शास्त्रमा पाइँदैन । रह्यो कुरो खानपिनको, त आर्य सभ्यतामा अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, महिषमेध यज्ञ, अजःमेध यज्ञहरूमा घोडा, गाई, भैंसी र बाख्राहरू मारेर नपुगी मानिस मारेर गरिने नरमेध यज्ञसम्मको परम्परा थियो र सुरा-सुन्दरीमा देवराज इन्द्रभन्दा पारखी अरू कोही पनि नरहेको ती धर्मशास्त्रहरूमै उल्लेख छ । अनि राक्षसहरूलाई मात्रै मासु-रक्सीको नाममा बदनाम गर्नु कति उचित छ ?
महिलाहरूकै यी सबै चाडपर्वहरूको लागि विशेष सरोकार हुनुले के साबित गर्छ भने यी चाडपर्वहरू पितृसत्तात्मक समाज निर्माण सँगसँगै सुरू भएका छन् । यसको साथै सबै चाडपर्वहरूमा प्रयोग हुने सामग्र अन्न, दलहन, तेलहन स्थानीय कृषि उपज भएकोले मानव समाज कृषि युगमा आए पछि नै चाडपर्वहरू सुरू भएका हुने । खासगरी दशैंमा ठाउँ अनुसार जौ र मकैको जमराको प्रयोग भएको देखेर यी दुबै अन्नको अविष्कार पछि मात्रै दशैं सुरू भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वर्षायाम पछि खर-माटो-काठले बनेका घरहरूको मरम्मत गरी लिप-पोतका साथ दियो बालेर स्वस्थ वातावरा बनाउने हिसाबले यमपञ्चक यानी दीपावली सुरू भएको हो । त्यसै गरी सम्पूर्ण शक्तिको आदि श्रोत सूर्य भएकोले सूर्य-पूजाको रूपमा छठ सुरू भएको त प्रमाणित भइसकेको छ । त्यस्तै लखराँव-मधान (लघुरुद्री) जस्ता यज्ञको कुरो गर्ने हो भने आर्य-अनार्य मिलनको रूपमा शिव-पार्वती विवाहोत्सव मनाउने क्रममा सुरू भएको हो । फागुको त कुरै नगरौँ, विशुद्ध रूपमा हिउँदे बाली भित्र्याउने उत्सवको रूपमा यसको सुरुवात भएको मानिन्छ ।
तर यी सबै चाडपर्वमा दैँत्यहरूमाथि देउताको विजयको कुनै न कुनै प्रसङ्ग जोडिनु भनेको आर्य-अनार्य द्वन्द्वमा आर्य विजयका विभिन्न गाथाहरू पनि बनाइएका हुन् । जबकि देउता र दैँत्यको बारेमा भन्ने हो भने सनातनी धर्मशास्त्रहरूको अनुसार दुबै एउटै वंशका वंशज हुन् । कश्यप ऋषिलाई मानवको आदि गोत्र मानिन्छ । त तिनै कश्यप ऋषिकी दुई पत्नी मध्ये दीतिबाट दैँत्य र अदीतिबाट आदित्य यानी देउताको उत्पत्ति भएको हो । त्यसो भए एउटै वंशमा एउटा सन्तानका वंशजहरूको महिमा मण्डन र अर्काको वंशज अवगुणमात्रको बखान गर्नु कति उचित हो ?
मानवशास्त्रीय ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा पहिले दक्षिण एशिया अनार्यहरूको भूमि थियो । आर्यहरू पछि आए । दुइटैमा भीषण युद्ध चल्यो र यसको सँगसँगै बिहाबारी तथा रक्तसम्मिश्रण पनि । यसै जातीय द्वन्द्वलाई आर्य पक्षीय सनातनी शास्त्रहरूले देउता यानी आर्य र दानव यानी अनार्यको बीचको युद्ध बताउँदै आएका छन् । यती अवश्य नै सत्य हो कि आर्यहरूको बुद्धि तीक्ष्ण थियो, त्यसैले उनीहरू षड्यन्त्रकारी पनि थिए । जहाँ दैँत्यहरूको सहायता आवश्यक पर्‍यो, मित्रता र जहाँ अंशबण्डाको आवश्यकता देखियो त्यहाँ शत्रुता गर्नु उनीहरूको चरित्र थियो । तिनीहरूले नै आम श्रमजीवीहरूलाई मूर्ख बनाउन भाग्य, भगवान, स्वर्ग, नरकको परिकल्पना गरे ।
तर दैँत्यहरूले कतै आत्महत्या गरेका छैनन्, बरू आत्महत्या त भगवान भनाउँदाले नै गरेका छन् । मर्यादापुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामले आत्महत्या गरे । आदर्श नारीको उपमा पाएकी उनकी पत्नी सीताले उनको अत्याचार सहन नसकी उनीभन्दा पहिल्यै आत्महत्या गरिन् । भगवान श्रीकृष्णले हेर्दा-हेर्दै ५६ करोड यदुवंशीहरू आफू-आफूमै लडेर मरे । कृष्ण आफैँ एउटा माझीको वाणको घाऊले बिते ।
अलि राम्ररी विचार गरौँ । आर्य साम्राज्य कायम गर्ने उद्देश्यले रामायणको रचना भयो । केही हदसम्म वर्गीय द्वन्द्व तर सारमा अनुवांशिक औपचारिकता स्थापित गर्न अनेकौँ कुकर्ममाथि पर्दा हाल्दै महाभारत रचियो । त आजको साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद विरोधी युगमा सामन्ती आर्य साम्राज्यको स्थापत्वलाई रामायणको बहानामा मुक्त कण्ठले गुणगान गर्नु कति उचित हो ?
त्यसैले कालो वर्ण, गँठीलो शरीर, सोझो कपाल, मुखबाट बाहिर निस्केको दाँत, अग्लो कद भएका सबैलाई यदि हामी राक्षस नै देख्छौँ, जबकि आज न कुनै भाषा न कुनै रगत नै शुद्ध बचेको छ, भने कति उचित होला ? त्यसैले दशैं सहित हाम्रो जीवनमा आउने अन्य चाडपर्वहरूलाई सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक प्रेम र समग्र मा ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ यानी विश्व नै परिवार हो भन्ने मानवीय भाइचारा बढाउने उद्देश्यले निरन्तरता दिनु उचित होला । साथै यसको लागि शालिनताका साथ चाडपर्व मनाउनु उचित ठहरिनेछ कि न कुनै पर्व ढोल बजाएर आओस् न ऋण बोकाएर जाओस् ।
ओमकारेश्वर बस्ती, वाणस्थली, चन्द्रागिरि-७, काठमाडौँ ।
निजी आवास पुनःनिर्माणको गति सुस्त